TOP News: Kenya oo soo Iibsatay gaadiid Casri ah oo ay ugu Talagashay La dagaalanka Alshabaab.” Sawirro” – Gedo Times
Inkastoo aanay Kenya si rasmi ihi u cadayn dalka ay gaadiidkan ka soo iibsatay, ayaa waxaa hadana la dhihi karaa tani waxay ku soo beegmaysaa, xilli Kenya askar fara-badan looga laayay weerarkii 15-kii bishii January ka dhacay Degmada Ceelcadde ee Gobolka Gedo.
Xukuumadda Nairobi iyo Taliska Militariga, ayaan illaa iyo hadda shaacin tirada rasmiga ah ee askartooda looga dilay weerarka, ay Al Shabaab kula wareegtay xeradii ay ku lahaayeen Degmada Ceelcadde.
Al Shabaab oo ka hadashay tirada ay Ciidanka Kenya kaga dishay weerarkaasi, ayaa waxay ku sheegtay in ka badan 100 askari. Al Shabaab waxay kaloo sheegtay in 12 kalana ay gacanta ku dhigtay, iyagoo nool.